FDA မှ ဒုတိယ ကြီးကြပ်ရေးမှူး အဓမ္မကျင့် အသတ်ခံရမှု တက္ကစီယာဉ်မောင်းကို ပုဒ်မကြီးလေးခုဖြင့် တရား? - Yangon Media Group
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်က ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၌ ယင်းအမှုမှစွပ်စွဲခံ မျိုးဇော်ဦးကို ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၃ဝ၂(လူသတ်မှု)/ ၃၇၆ (မုဒိမ်းမှု)/၃၇၇(ဓမ္မတာနှင့်ဆန့်ကျင်သော ကာမစပ်ယှက်မှု)/ ၃၉၄ (လုယက်မှုကိုကျူးလွန်ရာတွင် မိမိအလိုအလျောက် နာကျင်စေမှု)တို့ဖြင့် တရားစွဲတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ”ဒီနေ့ကတော့ တရားရုံးမှာ ပုဒ်မလေးခုနဲ့ တရားစွဲတင်လိုက်တယ်။ အကုန်လုံးက အမှုကြီးပုဒ်မတွေပဲ”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။ တရားစွဲတင်ပြီးနောက် ရုံးတော်မှ မျိုးဇော်ဦးကို ရှေ့နေငှားနိုင်သလားဟု မေးရာ ¤င်းက မငှားနိုင်ဟုဆိုသဖြင့် နိုင်ငံတော်မှ ရှေ့နေငှားပေးသွားမည်ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
ရုံးချိန်းကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်သို့ ပြန်လည်ချိန်းဆိုခဲ့သည်။ လက်ရှိ တရားစွဲထားသောရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ- ၃ဝ၂ အရ ပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်းပေါ် ပေါက်ပါက အမြင့်ဆုံးသေဒဏ်မှ အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်အထိလည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ-၃၇၆ အရ အမြင့်ဆုံးတစ်သက်တစ်ကျွန်းဒဏ်မှ ထောင် ဒဏ်ဆယ်နှစ်ထိလည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ-၃၇၇ အရ အမြင့်ဆုံးတစ် သက်တစ်ကျွန်းမှ ထောင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်ထိလည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ- ၃၉၄ အရ အမြင့်ဆုံးတစ်သက် တစ်ကျွန်းဒဏ်မှ အလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်ထိလည်းကောင်း ချမှတ်နိုင်သည်ဟု ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ၌ဖော်ပြထားသည်။
ကမ္ဘောဒီးယား သတင်း လွတ်လပ်ခွင့် ကျဆင်း၊ သတင်းသမားများ ဖိနှိပ်ခံရ ဟုဆို
ဗန်းမော်မြို့ရှိ ဂေါ်ရာကန် အတွင်း၌ အမည်မသိ အမျိုးသား အလောင်းတစ်လောင်း တွေ့ရှိ
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံ ခံရသည့်နေ့က ဝတ်ဆင်ထားသည်ဆိုသော ဘောင်းဘီတိုကို အောင်ဝင်းဇော် သက်သေခံ တင်သ??